फल पसल क्रिसमस संस्करण |
छुट्टी सिजन यहाँ छ र यसैले NetEnt आफ्नो खेल विकास र तिनीहरूलाई क्रिसमस को एक स्पर्श दिन एक कदम अगाडी भएको छ. Coinfalls क्यासिनो मा फल पसल क्रिसमस संस्करण आनन्द लिनुहोस् स्लट मोबाइल बेलायत, लोकप्रिय स्लट राम्रो यो संस्करण संग मिल्यो. छुट्टी सिजन आधारित स्लट खेल खेलाडीहरू भण्डारमा ठूलो जीत छ, त्यसैले आफैलाई उठाउनु र यो स्लट केही अचम्मको जीत जीत तयार. फल दोकान को रोमाञ्चक स्लट खेलाडीहरू केही अचम्मको जीत ल्याउन सुन्दर परिमार्जन गरिएको छ.
यो स्लट मोबाइल बेलायत खेल गुणस्तर ग्राफिक्स संग पूरा र सरल गेमप्ले विशेषताहरु गरिएको छ, यसैले सबै प्रकार को खेलाडीहरू यो रोमाञ्चक स्लट खेल खेल्न सक्छन्. उज्ज्वल रंग र क्रिसमस प्रतीक पृष्ठभूमिमा प्रदर्शित मनोरंजन र संलग्न खेलाडीहरू राख्न निश्चित हो. त्यहाँ wilds छन्, यो स्लट खेल संग रमाइलो गर्न छरिन्छ र थप खेलाडीहरू. अगाडि जानुहोस् र यो क्रिसमस थिम्ड स्लट संग विशेष सुविधाहरू आनन्द.
फल पसल क्रिसमस संस्करण विकासकर्ता बारे
यो शानदार क्रिसमस विकासकर्ता स्लट मोबाइल बेलायत NetEnt छ र तिनीहरूले सधैं आफ्नो क्यासिनो खेल प्रत्येक रोजगार कि रचनात्मकता लागि ज्ञात गरिएको छ. तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो सिर्जना गर्न काम र यसैले तिनीहरूले अनुयायीहरूलाई प्रशस्त छ.
को एउटा सिक्का आकार संग 0.01-2.00, रोमाञ्चक फल पसल क्रिसमस संस्करण छ5रील र 15 paylines. छुट्टी सिजन प्रेरित, यो एक रोचक छ स्लट मोबाइल बेलायत खेलाडीहरू रमाइलो गर्न को लागि कि सुन्दर प्रतीक छ. यो पनि छुट्टी आत्माको मुड अनुरूप लागि डिजाइन गरिएको छ र यसैले खेलाडीहरू यो स्लट को रील संग क्रिसमस को सुन्दरता रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ.
वृद्धि र कमी बटन शर्त को आकार समाधान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र एक ठूलो हद सम्म शर्त रकम जितको रकम निर्धारण, यसैले बनाउन बुद्धिमानीसाथ शर्त को आकार समाधान पक्का. फल दोकान लोगो आधार खेल नै विभिन्न फल प्रतीक संग sparked गर्न सकिन्छ जितको संयोजन र निःशुल्क spins पूरा गर्न अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ यो स्लट खेल मा जंगली छ र यसैले.
फल पसल क्रिसमस संस्करण एक सुन्दर छ स्लट मोबाइल बेलायत कि अद्भुत सुविधाहरू ईन्जिनियर गरिएको छ. खेलाडीहरू हरेक सही स्पिन संग को पकड प्राप्त गर्न लागि स्लट खेल मा विभिन्न फल र प्रतीक अचम्मको जीत छ. अगाडि जानुहोस् र यो स्लट खेलको रील स्पिन र क्रिसमस को रोशनी तपाईंले केही अचम्मको जीत ल्याउन गरौं.